သင်ဒီမှာပါ: Home / ကြီးထွားလာ Solutions / ဘယ်လိုတိုးတက်ကြီးပွားစေရန် / ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် / Pankar-huyu - Semi-မြေအောက် Mini ကို-ဖန်လုံအိမ်
တစ်ဦးက Pankar-huyu ၏ပုံကြမ်း
Benson Institute မှအဆောက်အအုံတစ်ခု Pnakar-huyu
တစ်ဦး Walipinii တွင်မစိုက်ပျိုးအမျိုးသမီးများနေ့
1 အခွအေနေ - ဘယ်လိုကြမ်းတမ်းအခြေအနေများခုနှစ်တွင်အားလုံးမှာတစ်စုံတစ်ရာတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်
2 စိန်ခေါ်မှု - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်တစ်ဦးကစျေးပေါ Follow-up, ရန်လွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းကိုရှာပါ
4 အဆိုပါ Pankar-huyu ဖန်လုံအိမ်၏တီထွင်သူအကြောင်း
5 Pankar-huyu ပြီးတော့ Walipini- ကိုးကား
အခွအေနေ - ဘယ်လိုကြမ်းတမ်းအခြေအနေများခုနှစ်တွင်အားလုံးမှာတစ်စုံတစ်ရာတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်
Altiplano (မြင့်မားသောလွင်ပြင်) ကိုစီးပွားရေးအရအဆင်းရဲဆုံးဒေသ
စိန်ခေါ်မှု - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်တစ်ဦးကစျေးပေါ Follow-up, ရန်လွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းကိုရှာပါ
အဆိုပါ Pankar-huyu ဖန်လုံအိမ်၏တီထွင်သူအကြောင်း
ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ PHs အကြောင်းကိုအချို့သောပိုပြီးမှတ်ချက်ပေးရန်ဝမ်းသာတယ်။Well PH has been developed en 1997, with4units located in Bolivian Altiplano, built in BensonXCHARXs station area. I tried it with the adviser of Dr. Paul Johnston, Luis Espinoza and Luis Iturri. then in 1998 I receivedaGilbert prize to conduct the first research asabachelor degree thesis. PH is, talking the truth, the best artisanal green house module, for its productivity due to: small as to be an independent micro-climate and cheap and easy to be handled by women or children, butalittle performances were made because Benson stopped in upgrade it. Nevertheless XCHARXthere are more than5thesis ins this noduleXCHARX
Pankar-huyu ပြီးတော့ Walipini- ကိုးကား
အဆိုပါ Pankar-huyu များ၏အပြီးအစီးပုံပြင် – This link goes to something related to the Benson Institution but not anymore to the pankar-huyu.
ဖန်လုံအိမ်စာရွက်စာတမ်းများ၏ repository (PDF ကိုအဓိကအားဖြင့်)Look fro the document: Walipini from same author of the Pankar-huyu, Noel Velasco